Wepụ.bg: Wepu Ihe Ndabere Foto site na Headshots, Ndị mmadụ, na Ihe Na-enweghị ntụpọ na AI | Martech Zone
Ọ bụrụ n ’esoghi Joel Comm, mee ya. Ugbu a. Joel bụ otu n'ime ihe enyemaka kachasị amasị m maka teknụzụ. Ọ na-ekwu okwu n'eziokwu, na-akwụwa aka ọtọ, na-enweghị nghọta. Onweghi otu ubochi gabigara na m nagaghi achoputa ihe ochoputara ozo… ma taa bu nsogbu!
Joel mere ka onye ọ bụla mara banyere ngwá ọrụ ọhụrụ n'ịntanetị, wepụ.bg. Ngwá ọrụ ahụ na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji nyochaa ihe oyiyi na ndị mmadụ wee wepụ n'ụzọ zuru oke na njedebe.
Ọ bụrụ na ịnwalela iji Photoshop mee ihe, ị ga-amata ụdị ahụmahụ jọgburu onwe ya. N'agbanyeghị Photoshop si nchicha nhọrọ, na ọbụna ha anwansi nhọrọ, ha abịaghị nso. Ikiri nnukwu foto onye na-ehichapụ ihe ndabere dị ịtụnanya.
Agaghị m enye gị nkuzi otu esi eme ya n'ihi na enwere m olile anya na agaghị, arụ, mgbe ọ bụla, agaghị arụ ọrụ ahụ ọzọ. Nke a bụ nnwale nke m bulitere na wepụ.bg. Achọrọ m ịnwale ya ezigbo ule - enweghị ezigbo nso na ọtụtụ nkọwa ndabere.
Wepu Ndabere na foto nke otu ndi mmadu
Na nke a bụ ihe dị ịtụnanya:
Injin ahụ ọbụna wepụrụ ịnyịnya ígwè ahụ! Foto ahụ gbanwetụrụ gbanwere nha na oke dị n'etiti etiti ahụ na ntanetị na ntanetị. Nanị ịtụnanya!
Wepụ Mụrụ ya si a Headshot
Wepu Mụrụ Mkpụrụ site na Akara ma ọ bụ Ihe ọzọ
mgbe Remove.bg Ezubere nke mbụ iji wepu nzụlite site na isi na ndị mmadụ, ha ewepụtala algorithms ha ka ị nwee ike bulite ihe ọ bụla onyonyo na ọrụ ahụ ma ọ ga-ehichapụ ndabere. Ejirila m ya ọtụtụ oge maka nke a ma ọ rụọ ọrụ dị egwu!
Wepu Ngwaọrụ Ndabere Foto & API
Online Ngwá Ọrụ Wepụ Azụ - Zuru okè n'ihi na otu image nhazi na ule tupu na-agba ọsọ a ogbe, na Reze.bg weebụsaịtị bụ ụzọ maka ọtụtụ ndị ọbịa. Na preview oyiyi bụ mgbe niile free! N'ebe a, ị ga-ahụkwa nchịkọta akụkọ nke na-ahapụ gị ịgbanwe agba ndabere ma ọ bụ onyogho.
Ngwaọrụ Desktọpụ iji Wepụ Azụ - desktopdị desktọọpụ nke wepụ.bg maka Windows, Mac, ma ọ bụ Linux na-enye gị njikwa karịa. Ka ihe atụ, ị nwere ike họrọ mmepụta format. Ọ dịkwa mma maka nhazi usoro ọtụtụ puku na puku oyiyi otu na nke ọzọ: ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-ere n'ịntanetị ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ọdịnaya ndị ọrụ.
Mgbatị Photoshop iji Wepụ Azụ - Nkọwapụta onwe! Wepu onyonyo site na go-to nhazi ihe oyiyi na-enweghị ihe ịga nke ọma na ngwaọrụ ndị arụnyere. Mgbutu ọ bụla emere na Mgbatị na-abịa na nkpuchi nkpuchi sara mbara nke ukwuu maka edezi edezi.
API ka Wepụ Image ndapụta - The API bụ ihe ngwọta kachasị agbanwe anyị na-enye. Can nwere ike iwekọta agbatị agbatị iji nweta njikwa zuru oke na mmepụta na nhazi ogbe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ arụmọrụ ọ bụla. Obodo anyị emeelarịrị ụdị ihe ntanetị dị egwu maka Figma, WooCommerce, Sketch, na Visual Studio Code.
Nhọrọ ọnụahịa gụnyere atụmatụ ndenye aha ma kwụọ ụgwọ ka ị na-aga.
Gbalịa wepụ.bg Ugbu a!
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m maka Remove.bg ke ibuotikọ emi.
Tags: aiandroid ngwa wepụ image ndabereAPIAmamịghe echicheDrupalfigmaLinuxPhotoshopPhotoshop ndọtịwepụ ndaberewepu azu apiwepu isi alawepu onyonyowepụ logo ndaberewepu ndi mmaduwepụ.bgEkewindowswoocommerce